भारतले न्यूजिल्याण्डसँग लियो विश्वकप हारको बदला, टी-२० श्रृंखलामा ‘क्लिन स्विप’ – Janadesh Daily | ePaper
भारतले न्यूजिल्याण्डसँग लियो विश्वकप हारको बदला, टी-२० श्रृंखलामा ‘क्लिन स्विप’
November 22, 2021 by Jandesh Daily
जनादेश वाच ।
भारतले न्यूजिल्यान्डविरुद्ध लगातार तेस्रो जित हात पार्दै इतिहास रचेको छ। भारतले टी-ट्वान्टी क्रिकेट सिरिजमाथि न्यूजिल्याण्डविरुद्ध ३-० को क्लिन स्विप गरेको हो। आज भएको अन्तिम सिरिजमा भारतले ७३ रनको फराकिलो जित निकाल्न सफल भयो।
कोलकताको इडेन गार्डेन क्रिकेट ग्राउण्डमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको भारतले न्यूजिल्याण्डलाई १ सय ८५ रनको लक्ष्य दिएको थियो। यस क्रममा उसले ७ विकेटको क्षतिमा पूरै ओभर खेलेको थियो। भारतका लाागि यसै सिरिजबाट टी-ट्वान्टी कप्तान बनेका रोहित शर्माले सर्वाधिक ५६ रन बनाए भने इसन किसनले २९ रन जोडे।
सूर्यकुमार यादव ४ बल खेल्दै शून्य रनमा पेभेलियन फर्के पनि श्रेयस ऐर बेंकेटस ऐरेले क्रमशः २५ र २० रन बनाए। हर्षल पटेलले १८ रन बनाए भने दीपक चहर २१ रनमा नटआउट रहे।
भारतले दिएको सम्मानजनक लक्ष्य पछ्याएको न्यूजिल्याण्ड भने १७ दशमलव २ ओभरमै अलआउट भयो। मार्टिन गुप्तिलले ३६ बलमा अर्धशतक पूरा गरे पनि अन्य खेलाडीले गतिलो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। न्यूजिल्याण्डका मार्क चापमान र ग्लेक्स फिलिक्स शून्य रनमै आउट भए।
तीन ओभर खेलेका भारतका अक्षर पटेलले मात्र नौ रन दिएर तीन विकेट लिन सफल भए। उनी खेलको प्लेयर अफ द म्याच घोषित भए। त्यस्तै हर्षल पटेलले तीन ओभरमा २६ रन दिँदै २ विकेट लिए।
भारतले यसअघि सिरिजकै दोस्रो खेलमा पाँच र पहिलो खेलमा नौ विकेटको फराकिलो जित निकालेको थियो। भारतले न्यूजिल्याण्डसँग यसअघि टी-ट्वान्टी विश्वकपको सुपर १२ मा भएको खेलमा ८ विकेटको पराजयको बदलासमेत लिएको छ।
न्यूजिल्याण्डविरुद्ध पहिलो पटक ‘क्लिन स्विप’
सन् २०१२ मा पहिलो पटक यी दुई देशबीच घरेलु सिरिज खेलिएको थियो। त्यतिबेला महेन्द्रसिंह धोनीको कप्तानीमा रहेको भारतलाई न्यूजिल्याण्डले १-० ले हराएको थियो। यद्पि त्यसबेला दुई खेलको सिरिज थियो।
त्यस्तै सन् २०१७ को ३-० को सिरिजमा न्यूजिल्याण्डलाई भारतले २-१ ले हराएको थियो, जतिबेला भारतका कप्तान विराट कोहली थिए। उक्त सिरिज भारतले उचाले पनि न्यूजिल्याण्डमाथि भारतको यो पहिलो क्लिन स्विप हो।
पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलमा ४५० छक्का पूरा गरेका भारतीय टी-२० कप्तान रोहित शर्मा आज फेरि ‘सिक्सर किङ’ बने। खेलमा ३ छक्का प्रहारसँगै रोहितले टी–२० मा आफ्नो १५० छक्का पूरा गरेका छन्।
यो कीर्तिमान बनाउने उनी विश्वकै दोस्रो र भारतका पहिलो ब्याट्सम्यान बनेका छन्। रोहितभन्दा अगाडि मार्टिन गुप्टिल (१६१) को नाम छ।
Posted in खेलकुद, विश्व
थ्रीजीभन्दा फोरजी प्रयोगकर्ता बढी
शिक्षा मन्त्रालयले सीटीईभीटीसँग स्पष्टीकरण सोध्यो, कारण यस्तो छ ?
एमालेको कुम्भमेलासंग हाम्रो विचार निर्माणको सम्मलेनको तुलनै हुँदैनः अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
ओलीका फेबरेट पोखरेल दाजुभाइ, विष्णु र सुवासलाई साइड लगाइँदै
यसरी आयो नेम्वाङले विद्रोह गर्ने अवस्था, नोक-झोंकमा ओलीसँग उनले सोधेको मिलियन डलर प्रश्न
जाजरकोटमा बस पल्टियो, ५ को मृत्यु, २८ घाइते
एकलौटी हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनमा जान किन डराए ओली, उनले सार्वजनिक गर्ने सूचीमा को को छन् !
वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा चुनौती, सतर्क रहन चिकित्सकको आग्रह
संसार तर्साउने कोरोनाको खतरनाक नयाँ भेरिएन्टः ‘ओमिक्रोन’ रोक्न नेपालको तयारी के !
ओलीको पेल्ने रणनीति बुझेपछि भीम रावल रावल जंगिए, अनि ओलीले भने- म नउठ्न पनि सक्छु !